थपिएको म्याद गुज्रिदा समेत बनेन सडक « Loktantrapost
थपिएको म्याद गुज्रिदा समेत बनेन सडक
२ माघ २०७६, बिहीबार १०:४२
भद्रपुर । सरकारले निर्धारित समयमा विकास निर्माणका परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने कडा निर्देशन जारी गर्दै आए पनि निर्माण व्यवसायीले त्यसको ठाडै अवज्ञा गर्न छाडेका छैनन् ।
झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विर्तामोडलाई भद्रपुरसँग जोड्ने महत्वपूर्ण सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यको ठेक्का लिएको आशिष÷प्रेरा जेभी ललितपुरले तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य गर्न सकेन ।
आशिष÷प्रेरा जेभी ललितपुरले विर्तामोडदेखि गरामनीसम्मको ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने भनी २०७५ असार २४ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । डिभिजन सडक कार्यालय दमकका अनुसार सो आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने अन्तिम मिति २०७६ असोज २३ गते थियो ।
तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य आधा पनि नभए पछि आशिष÷प्रेरा जेभीका सञ्चालक राजकिशोर गुप्ताले पुस मसान्तभित्र निर्माण सक्ने गरी ३ महिना म्याद थपेका थिए । तर थपिएको म्यादभित्र समेत सो सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेन ।
डिभिजन सडक कार्यालय दमकका प्रवक्ता ई. चन्द्रेश्वर साहले सो सडकको ठेक्का नं. डीआरओडीएमके÷३३७३६६–४÷०७४÷०७५÷१० रहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सो सडक २७ करोड ९ लाख ७० हजार ९६ रुपैयाँ ५८ पैसामा ठेक्कामा लागेको थियो ।
सो सडक निर्माण समयमै गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा हरेक दिन खबरदारी गर्दै आउनुभएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गणेश पोखरेल सो सडकको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले पप्पु कन्स्ट्रक्सनकै जस्तो व्यवहार देखाएको बताउछन् । उनले माथिल्लो निकायसम्म पहुँच भएको भन्दै अटेर गर्ने आशिष÷प्रेरा जेभी माथि कडा कार्वाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
मुख्य बजार क्षेत्रको सडक लामो अवधिदेखि धुलाम्य र भताभुङ्ग पारेर निर्माण कार्य अलपत्र पारेको भन्दै विर्तामोडका व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् । तोकिएको अवधिमा सडक निर्माण नगर्ने र भताभुङ्ग पारेर छाड्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ताहरु मात्र नभएर मेची अञ्चलकै व्यापार व्यवसायमा असर परेको छ । सो सडकले चन्द्रगढी विमानस्थललाई समेत जोड्छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय दमकका प्रवक्ता साहका अनुसार आशिष÷प्रेरा जेभीका सञ्चालक राजकिशोर गुप्ताले सो सडक निर्माणका लागि फेरि म्याद थप गरिदिन भन्दै कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ । उहाँले असार मसान्तसम्म काम सक्ने गरी ६ महिना म्याद थपिदिन निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट माग गर्दै निवेदन आएको बताए ।
विद्युत र टेलिकमका पोल हटाउन ढिलाई भएको कारण आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएको निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको निवेदनमा बहाना गरेका छन् ।
विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले हालै पेटी ठेक्का लिएका विर्तामोडका केदार गिरीले तीब्र गतिमा काम अघि गरिरहेको पाइएको धारणा व्यक्त गर्दै तोकिएको अवधिमा काम नसकिनुमा मुख्य ठेकेदार कम्पनीले यस अघि काममा गरेको ढिलासुस्ती जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । उनले अब थपिने अवधिमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने बताए ।